सावधान ! ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले झुक्किएर पनि खाँदै नखानुस् यी खानेकुरा - Lokpath Lokpath
२०७६, ७ असार शनिबार १०:१०
प्रकाशित मिति : २०७६, ७ असार शनिबार १०:१०
काठमाडौं | पेटमा प्रकृतिले नै एसिड उत्पादन गराउँछ। हामीले खानासँग खाएको ब्याक्टेरिया मार्नेदेखि लिएर खानेकुरा पचाउने काम यही एसिडले गर्छ। यो एसिड निस्किएपछि यसबाट बच्न शरीरमा आफ्नै ‘मेकानिजम’ हुन्छ।
कुनै कारणबस यो मेकानिजममा ह्रास आयो भने ग्याष्ट्रिक हुन्छ। ग्याष्ट्रिक हुँदा पेट पोल्ने, दुख्ने, ढ्याउ–ढ्याउ आउनेदेखि लिएर बढ्दै गएमा अल्सरसम्म हुन्छ।
त्यसैले ग्यास्ट्रिक भएमा यस्ता खानेकुराको प्रयोग गर्नुहुँदैन :
लकडाउनमा मोटोपनले सतायो ? यसरी घटाउनुहोस् तौल (टिप्ससहित)
काठमाडौं – करिब ६ महिना लामो लकडाउन : एकैठाउँको बसाई , शारीरिक अभ्यास
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल नभएका ६४९ स्थानीय तहलाई पाँच श्ययाका
काठमाडौं । सरकारले विर अस्तपाललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।